Wednesday July 29, 2020 - 00:02:20 in Maqaallo by Super Admin
Caawa waxaan raba in aan iftiimiyo dhowr arimood haysata xisbiga waddani iyo xaruntiisii guud..!! Waxa ka jira xisbigii
Caawa waxaan raba in aan iftiimiyo dhowr arimood haysata xisbiga waddani iyo xaruntiisii guud..!! Waxa ka jira xisbigii gudahiisa dagaal balaadhan iyo awood sheegasho oo u kow ka yahay xoghayaha ku meel gaadhka khadar xuseen cabdi.. Kale qaybsanaan uu ka abuuray xarunta xisbiga, iyo awoodii maamule ee agaasimaha Xarunta dhexe ee xisbiga jamaal aadan diiriyr oo shaqadiisii gacan maroojiyey. Waa ku ceeb xisbiga in u xighaye sida khadar dhukur oo u ahaado xoghaye!.Waa ta keentay in jamaal suuqyada iska joogo Xog-hayaha ku meel gaadhkan khadar dhukur na maroorsado xilkaas..! Ma saas ba ugu danbeysay waddani in u maamulkiisi halkaas gaadho.ceeb bay ku tahay hogaanka sare in u waxba ila haatan talaabo ka qaban xoghayaha ku meel gaadhka ah ee aafada ku noqday waddani.
Kaaga daran wuxu baryahan ka dhex waddani xarunta shirar kooxisnimo iyo abuuris khilaafad xisbiga gudahiisa..Kooxdan uu hoggaaminayo Xoghayaha ku meel gaadhka WADDANI waxay ku hawlan yihiin shirqoolo lagu mijo xaabinayo xisbiga WADDANI,kuwaas oo inta badan ka shaqeeya hagardaamada iyo hantaaqada Xisbiga ayaa waxa kamida afhayeen Barkhad Jaamac (batoon) iyo Xoghayaha gaarka ee Gudoomiye cirro cabdiqaadir saalax iidle (kuus) iyo kooxo kale oo suuqa jooga!!..xisbigii waddani wuxu ku jira marxalad aad u xun xaga waliba maamulka iyo is xagxagashada dhexdooda, waxaana fitnadaas ka masuul ah xoghayaha xisbiga khadar...